Google AdWords yama-ejensi | Wonke Amathuluzi Owadingayo!
Google AdWords yama-ejensi: Yonke imikhankaso yamakhasimende akho ilawulwa
Ngalezi Google Ads for Agencies uzokonga isikhathi ukuze ukwazi ukugxila kokubaluleke kakhulu: amaklayenti akho.
Izici ezingcono kakhulu zezinhlelo zokusebenza ithimba-egxile
Thola izaziso kanye nemibiko esikhathini sangempela umkhankaso ukusebenza amaklayenti akho.
Yaziswa ngalokho okubaluleke kakhulu Google AdWords lama-Agencies
Setha futhi notifications ukwazi ukuthi ukuguqulwa kwehla nini noma lapho udinga ukwenza imali yomkhankaso.
Faka ku- Slack Engeza Amathimba Ngeza ku- Google Chat
Okuzenzakalelayo Smart Imibiko njalo ngenyanga
monthly reports ejulile yenyanga ekhombisa kahle amamethrikhi nokukhula kwemikhankaso yamakhasimende akho.
Yonke idatha ngokuchofoza okukodwa ku- Google Sheets
Ungachithi umzuzwana ngokuqoqa ngesandla amamethrikhi amaklayenti akho. Bangeze kalula futhi ngokushesha add them to a Google Sheet.
Download Google Ishidi isengezo
Thuthukisa umkhankaso ukusebenza amaklayenti wakho '
Hlanganisa yonke idatha yomkhankaso ku- Google Sheets , yenza ngezifiso izexwayiso zokusebenza njengoba kudingeka, futhi uthole Imibiko Yanyanga zonke ye-Smart engathunyelwa kumakhasimende akho.
Download Google Ishidi isengezo Faka ku- Slack Engeza Amathimba Ngeza ku- Google Chat
Okuningi nge- Google AdWords yamathuluzi ama-ejensi
Funda kabanzi ngamathuluzi ethu enzelwe i- Google AdWords yama-ejensi nakho konke esingakunikeza kona nebhizinisi lakho.
Yini sinikeza wena kanye nokukhangisa ejensi yakho
Amathuluzi ethu akhiwe ngendlela yokuthuthukisa Google AdWords isu ejensi kanye iklanywe le Clever Ads ithimba ukwenza ukuphila kwakho kube lula futhi ukukunika ukulawula okuphelele, ngaso sonke isikhathi futhi kusuka nomaphi lapho ufuna, yemikhankaso yakho nalabo amaklayenti wakho .
Ingabe ufuna ukuthi yonke imikhankaso yakho yenziwe ngcono, ibe sesikhathini, futhi ngqo Google chat yakho ye-Google? Konke lokhu nokunye okuningi esingakunikeza kona, konke kuklanyelwe ukukutshela okudingayo ukuze uthuthukise imikhankaso yamakhasimende akho ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu.
Siqinisekisa ukuthi sine- AdWords enhle kakhulu yokuhlanganiswa kwama-ejensi, thola okuningi!
Yonga isikhathi, imali kanye nezinsiza!
Amathuluzi wethu Google Ads zeGoogle aklanywe ngenhloso yokonga imali, izinsizakusebenza, futhi okubaluleke kakhulu .... Isikhathi!
Ngokuhlanganiswa kwethu Slack , Microsoft Teams , i- Google Chat bot , ama- ads Google Spre, nokwakhiwa komkhankaso wethu wezikhangiso ze- Google Ads , ukwenza kahle nokulayisha, uzokwazi ukusebenzisa isikhathi sakho esibalulekile kulokho okubaluleke kakhulu: amakhasimende akho, kanye namanje unesikhathi esisele sokujabulela lelo khofi lasekuseni olithandayo!
Thola amathuba amahle kakhulu webhizinisi, yenza imikhankaso ehamba phambili, thola izaziso ezibaluleke kakhulu ukugwema iziphazamiso ezingadingekile, uthole imibiko yanyanga zonke, njll. Ngamafuphi, amathuluzi aqondiswe ku- AdWords yama-Agency azokongela isikhathi sokugxila kokubaluleke kakhulu.
Ongakwenza nge amathuluzi ethu
Okuningiliziwe imibiko yanyanga zonke PDF ukuthi kahle ukukhombisa amamethrikhi nokukhula kwemikhankaso amaklayenti akho. Gxila idatha ezilapho, balinganise kuphela okubalulekile ngakho ungagcina isikhathi ekuhlaziyeni ngaphandle kokulahlekelwa imininingwane kulokho okubaluleke kakhulu futhi wenze unolwazi, izinqumo data-enophephela.
Ukuguqulwa kwefaneli, amagama angukhiye ... Konke ofuna ukukwazi emibikweni eyenziwe ngezifiso. Yonke imininingwane oyidingayo, nokuthi uyisebenzisa kanjani. Thuthukisa imikhankaso yakho nemikhankaso yamakhasimende akho ngokuya ngokusebenza, ngokusebenzisa amathiphu nezincomo ezilungele ukusetshenziswa ezenzelwe ngqo i- Google Adwords yama-ejensi.
Izici ezingcono kakhulu zezinhlelo zokusebenza ithimba ezisekelwe
Thola izaziso zesikhathi sangempela nemibiko ekusebenzeni komkhankaso wamakhasimende akho. Uma sikhuluma nge- AdWords yezinhlaka, kufanele sinake ukuthi yiliphi ithuluzi esilisebenzisayo nesifuna ukulisebenzisa ukuthola izaziso nemibiko yemikhankaso yethu. Usebenzisa ini kwi-ejensi yakho? Ngethuluzi lethu uzokwazi ukuhlanganisa i- Google Ads nenye yamathuluzi wokuxoxa weqembu athandwa kakhulu emhlabeni wonke: I- Slack , Microsoft Teams noma i- Google Chat . Khetha futhi ukwandise ukusebenza kwemikhankaso yamakhasimende akho ngedatha!
Yaziswa mayelana kuphela izinto eziningi ezibalulekile
Lungiselela futhi wenze ngezifiso izaziso zakho ukuze wazi konke okwenzekayo emikhankasweni yakho nakulawo amaklayenti akho. Isibonelo, uma ufuna ukwazi ukuthi ukuguqulwa kwehla nini noma lapho ukusetshenziswa komkhankaso kudinga ukukhuphuka, setha esinye sezaziso zethu futhi sizokwazisa kuhlelo lokusebenza lokuxhumana oluthandayo! (I- Slack , Microsoft Teams noma i- Google Chat ).
Ngale ndlela, uyobe kube nguwe umuntu abonisa ngalo imingcele ufuna lokubekwa eqhulwini kodaba lokuvulwa, okuyinto Imininingwane ufuna ukuthola, futhi lapho zenzakalo zizodingidwa njengabangaqondakali futhi isidingo kukhonjiswe kuwe ukuze uqaphele lezo zikhathi / idatha kubalulekile .
Ukuze kungabonakali lutho futhi imikhankaso yamakhasimende akho ihlale iphezulu! Google Ads zama-ejensi akukaze kube lula kangako.
Ungamoshi omunye umzuzwana wesibili wokuqoqa amamethrikhi nedatha yomkhankaso kusuka kumakhasimende akho. Bangeze bonke kalula futhi ngokushesha ekhasini le-Google. Google Ads zama-ejensi kahle, zisebenzisa amathuluzi anikezwe i-Google nezinye izinhlelo zokusebenza ezaziwayo osuvele uzisebenzisa ku-ejensi yakho.
Google Sheets ingenye yamathuluzi asetshenziswa kakhulu emhlabeni wonke kuwo wonke amabhizinisi wokuhlela amadokhumenti namaqembu? Uma uyisebenzisa, ungathuthukisa izinqubo zakho futhi wenze yonke idatha yakho ithuthukiswe kuDrayivu yakho. Bekungeke kube lula!
Yini eyenza umehluko?
Kungani usebenzise amathuluzi wethu we- Google AdWords kuma-ejensi?
Kwa- Clever Ads siyaziqhenya ngokuba yingxenye yohlelo lweNdunankulu ye-Google Partners, esiqinisekisa ngalo ukuthi le nqubo ivikeleke ku-100% futhi siyathembisa ukuthi siyayihlonipha imininingwane yakho eyimfihlo kanye namakhasimende akho. Bangaphezu kuka-150,000 amabhizinisi nezinkampani abasebenze nathi futhi basethemba ukuthi bazothuthukisa Google Ads nokusebenza, ngemiphumela emihle kakhulu. Ngeke uzisole, indlela engcono kakhulu futhi eshibhile (yamahhala) yokwandisa Google Ads kuma-ejensi.
Ngamathuluzi nobuchwepheshe bethu sikwazile ukuguqula okuthile okuyinkimbinkimbi nokudla isikhathi kube yinto elula nesheshayo. Ungahle uthole ne- AdWords yezinhlangano zijabulisa nathi! Uzokwazi "ukudlala" ngemibiko yethu namathiphu wokuzuza i-ROI ephezulu (Return on Investment) kanye nesilinganiso esiphezulu ngaphandle kokuqaphela, konke ngenkathi ufunda!
Shintsha i-ejensi yakho ibe yi-ejensi eyinkomba Google Ads , ehlakaniphe kakhulu futhi enolwazi kakhulu kule nqubo kanye Clever Ads . Sihlala sazi ukuthi yini okufanele siyenze ngokulandelayo, ungasethemba ukuthi uzothatha izinyathelo zokuqala noma ezilandelayo.
Sikholelwa ukuthi noma iyiphi i-ejensi yanoma iluphi usayizi nesabelomali kufanele ikwazi ukufinyelela ukukhangisa kwe-Google, ngakho-ke sithuthukise amasu wezinto ze- Google Ads zamanxusa azokuvumela ukuthi uncintisane ezingeni lokudlala nezinhlangano ezinkudlwana ezinolwazi olunokumaketha okukhudlwana isabelomali.
Izizathu zokuthi kungani ungafuna ukusebenzisa amathuluzi ethu zingahlukahluka, noma ngabe usola ukuthi Google Ads zeGoogle ingenza kangcono, noma ngabe ufuna ukubheka ukuthi ngabe inkampani yakho yezentengiso isebenza kakhulu yini, noma mhlawumbe ngifisa ukwazi ukuthi ukusebenza kwabo kanzima kunomvuzo yini? Clever Ads AdWords ejensi iqoqo lakho lamathuluzi.
Ngaphezu kwalokho, ithimba lethu lochwepheshe lihlala likulungele ukukusiza, futhi ungahlala uthintana nabo nganoma yimiphi imibuzo, ukukhathazeka, iziphakamiso noma usizo oludingayo kumsizi @ cleverads .com, sizojabula ukukusiza ne-ejensi yakho nge noma yini oyidingayo ne-ejensi yakho.
Uxhumano Suite Amathuluzi
Enye inzuzo noma Inzuzo yokusebenzisa yethu AdWords namathuluzi Clever Ads ejensi ukuthi ungafinyelela yonke into kusuka yakho Clever Ads control panel, futhi ungakwazi sihlanganise amandla Google Ads nazo zonke kalula ukuphathwa ukuthi Clever Ads izipesheli wena. Yonke imibiko yethu, izexwayiso, amathiphu azokusiza ukuthi wakhe Google Ads elungiselelwe ngokuphelele amaklayenti akho, ukuze uhlale usesikhathini sama-algorithm amasha we-Google, izandiso zomkhankaso, njll. Ukukhiqiza amabhanela amahle emikhankaso yakho yokubonisa yamakhasimende, noma ukushuna imibono yamagama asemqoka, phakathi kwezinye izici. Isethi yethu eyodwa-in-one Google Ads zamathuluzi ama-Agency zikulungele ukwenza wonke umsebenzi onzima ngenkathi usebenzisa isikhathi sakho wenza lokho okwenza kahle kakhulu: ukusebenzisa nokuphatha ibhizinisi lakho nokwenza amaklayenti akho ajabule.
Ama-app Team ezisekelwe okuxhumana
Hlanganisa Google Ads ku- Slack , ku- Microsoft Teams , noma ku- Google Chat
Lungiselela izexwayiso zakho zangokwezifiso ukuze uthole imibiko yesikhathi esisodwa noma yesonto ukuze uthole amamethrikhi ngengxoxo bese uthola amagrafu namamethrikhi aphathelene nokusebenza kwe-akhawunti yeklayenti lakho. Google AdWords yama-ejensi ilula ngokuhlanganiswa kwengxoxo kanjena!
Google Ads zakho ze-Google zenziwe ngokuzenzakalela mahhala.
Thola okokugcina ukuphuma ads zakho nge- Clever Google Ads Audit futhi uthuthukise imikhankaso yakho yezikhangiso ze-Google ngokuncane.
Umhumushi Google Ads
Ungavuli asethe imikhawulo ibhizinisi lakho. Khangisa kuphi ufuna! Humusha konke ezilimini eziningi.
Hlunga imiphumela yakho bese bethola amathuba ephelele imikhankaso yakho.
Imikhiqizo eminingi Clever Ads
Zonke amathuluzi owadingayo ukuze wengeze amakhasimende akho 'digital imikhankaso ukumaketha.